Maitiro ekugovana mavhidhiyo uye mapikicha paGoogle Mifananidzo neiyo nyowani mameseji ficha | IPhone nhau
Maitiro ekugovana mavhidhiyo uye mapikicha paGoogle Mifananidzo nechinhu chitsva chekutumira mameseji
Kana zvasvika pakugovera mifananidzo kana vhidhiyo, vazhinji vedu, kana vasiri vese, kunyanya kushandisa WhatsApp, kuwedzera kune Teregiramu uye Apple Meseji. Mifananidzo yeGoogle inotibvumidza kugovana mifananidzo nemavhidhiyo, pamwe nemaalbabhurari nemaraibhurari Mumavhiki apfuura, iyi app / sevhisi yawedzera sevhisi nyowani.
Iyi nyowani yekutakura sevhisi, iyo Izvo hazvina kuitirwa kutsiva mapuratifomu anonyanya kushandiswa nhasi, inotibvumidza kugovana zvese mapikicha nemavhidhiyo sechikamu chehurukuro, zvichitibvumidza kuti titaure pane izvo zvemukati zvatinowedzera / kugovera pane nhunzi.
Kusvika ikozvino, kana isu tichida kugovera mufananidzo nevamwe vashandisi, taifanirwa kugadzira dambarefu rekutora mifananidzo kana vhidhiyo uye ugovana chinongedzo kwazviri. Nekuda kweiri basa nyowani, iro rekugovana ruzivo rwakareruka nekuti rinotibvumidza kuti titaure pane zvakagovaniswa zvemukati pamwe nekutibvumira kusevha pikicha muraibhurari yedu.
Kana tangosarudza iyo mufananidzo / vhidhiyo iyo yatinoda kuigovana, isu tinofanirwa kubaya pairi Goverana bhatani uye sarudza anogamuchira wemufananidzo.
Panguva iyoyo, hurukuro nyowani ichagadzirwan nemufananidzo kana vhidhiyo yatakagovana.
Mukukurukurirana ikoko, tinogona zvinoratidza kuti tinoda mufananidzo, nekutsikirira pamoyo, nyora zvinyorwa kuwedzera pakutitendera kuti tichengetedze iyo mifananidzo pane yedu kifaa, kuchengetedza munwe wakatsimbirirwa pamufananidzo.
Kana tangogadzira hurukuro, tinogona uwane zvakare Kuburikidza neKugovana tebhu, tabo uko kwese kukurukurirana kwatakagovana mifananidzo nemavhidhiyo zvinowanikwa.
Kuti uenderere mberi nekuwedzera mifananidzo mitsva kunhaurwa iyoyo, isu tinongofanirwa kumanikidza iyo mufananidzo icon ine yekuwedzera chiratidzo, izvo zviri chaizvo mushure mekuwedzera komendi kana isu tinogona kugovana mifananidzo zvakare nekuita nzira imwechete yandakatsanangura muvhidhiyo iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekugovana mavhidhiyo uye mapikicha paGoogle Mifananidzo nechinhu chitsva chekutumira mameseji
KuApple vanotendeukira kugadziriro yemamirioni ezvidzitiro zvekudzivirira izvo zvavanozopa
Iyo Aqara G2H kamera inoenderana neKeKKK Yakachengeteka Vhidhiyo